को हुन् त सिटिजन्स बैंकका डेपुटी सीईओ देवकोटा ? - को हुन् त सिटिजन्स बैंकका डेपुटी सीईओ देवकोटा ?
को हुन् त सिटिजन्स बैंकका डेपुटी सीईओ देवकोटा ?
२०७५, २6 चैत्र, 04:01:11 PM
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले रिक्त डेपुटी सीईओमा बोधराज देवकोटालाई नियुक्त गरेको छ । २०७५ साल चैत्र २४ गते आइतबार बसेको २९७औं सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई साे पदमा नियुक्त गरेको हो । उनी यसअघि सोही बैंकमा सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कार्यरत थिए । उनलाई २०७६ साल बैशाख १ गतेबाट लागु हुनेगरी डेपुटी सीईओमा नियुक्त गरिएको हो ।
देवकोटाले सो बैंकमा स्थापनादेखि विभिन्न पदमा रहेर नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्दै आइसकेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा एक अनुभवी बैंकरका रूपमा परिचय बनाएका देवकोटाले त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट वित्त व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् । उनले काठमाडौँ विश्व विद्यालयबाट वित्त व्यवस्थापनमा एमफिल पनि गरेका छन् ।
उनीसँग बैंकिङ क्षेत्रमा २३ वर्ष काम गरेको अनुभव छ । सिटिजन बैंक आउनुभन्दा पहिले नेपाल बैंक लिमिटेडमा महत्वपूर्ण ओहदामा रहेर काम गरेको अनुभव उनीसँग छ ।
सिटिजन्स बैंकले देशभर ८१ वटा शाखा, ७५ वटा एटएिम र ९९ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग इकाईहरुबाट करीब ४ लाख ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसैगरी, शाखाहरुसँगको समन्वय, निगरानी, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन एवं गुनासो सुनुवाई जस्ता कार्यहरु छिटो, छरितो, चुस्त र दुरुस्तरूपमा सम्पादन गर्ने उद्देश्यले बैंकले ७ वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयहरुको स्थापना गरिसकेको छ । बैंकले आगामी दिनमा आफ्ना ग्रहकको मागलाई ध्यानमा राखेर सवेवाहरु अझ थप्दै जाने जानकारी दिएको छ ।
सिटिजन्स बैंकको प्रदेश नं ३ को प्रादेशिक कार्यालय डिल्लीबजारमा
डोटीका ३ हजार ६ सय परिवारलाई सिटिजन्स बैंकको ५ करोड उपहार